Iipencake ezihlaza, iifestile kunye nesithombe. Ukupheka i-pancakes eluhlaza kunye neqanda kunye no-oyihlaza eluhlaza, nge sipinashi kunye noshizi.
Ukuphucula izitya eziqhelekileyo, ukuguqula zibe izitsha ezingavamile ngokupheleleyo kunzima neze. Ufuna nje ukubonisa ukucinga kwakho uze ufake iresiphi yakho oyithandayo isithako esingalindelekanga. Ngokomzekelo, ukwenzela ukubhaka i-pancakes eluhlaza, kunele ukubeka isipinashi esitsha okanye esityanisiweyo, esasikhatywe ngaphambili kwi-blender okanye inkqubo yokutya, kummandla we-puree kunye nombala okhanyayo we-emerald kuya kunikwa ukutya okuqhelekileyo.
Ukupheka i-pancakes eluhlaza nge sipinashi, iresiphi kunye neefoto ezisekelwe kwisithuba
Inhlama yale sidiyi ixoxwe ngobisi kunye namaqanda, ngaphandle kokusetyenziswa kwesilonda kunye nesoda. Ukugqitywa kwama-pancake kunqabile kwaye kuyomelele, kukunuka kwamatholo amatsha kunye nokugcina uboya obunzima nangemva kokupholisa.
amaqanda - iziqwenga ezimbini
umgubo wengqolowa - 5 tbsp
ubisi - 500 ml
ushukela - 1 tbsp
isipinashi eselisiwe - 200 g
ityuwa - ½ tsp
i-oyile yemifino - 2 tbsp
Isipinashi ihlanjululwe kwaye ibethe ngokucokisekileyo kunye ne-blender ibe yinto ecocekileyo.
Gubha amaqanda ngetyuwa kunye noshukela, uthele umgubo ococekileyo, uthele ubisi kwiqondo lokushisa elisezantsi uze uxoke inhlama eqhelekileyo. Ekugqibeleni, yongeza isipinashi, i-oyile yemifuno kwaye udibanise kakuhle.
Fry i-pan yokucoca ngeoli kunye nobushushu obushushu obuphezulu. Phalaza inxalenye yentlama bese ubhaka ama-pancakes amancinci. Gweba umqulu okanye imvulophu uze usebenze etafileni nge-ukhilimu omuncu, i-mayonnaise okanye i-sauce kaKhesari.
I-pancakes eneziqwenga ngeqanda kunye no-anyanisi eluhlaza
Iipancakes, eziphekwe ngokweli phepheni, ziyanondla, zithenda kwaye ziqhumisa kakhulu. Ikhontsi ekhethekileyo inikezwa ngepuphu elungiselelwe kwi-mustard ye-Dijon, inyosi yamanzi kunye neoli yeoli ecocekileyo.
I-cottage cheese - 150 g
Umgubo wengqolowa - 250 g
amaqanda - ii-2 pcs + 3 amaqhinga
ioli yomnquma - 2 tbsp
I-Butter - 2 tbsp
i-hazelnut ecoliweyo-2 tbsp
ukhilimu omuncu - 3 tbsp
i-anyanisi eluhlaza - ibhola eli-1
ubusi - 1 tsp
I-dijon lwesardard - 1 tsp
ityuwa - ¼ tsp
I-Cream kwi-blender cottage shiese kunye netyuwa, ipilisi kunye nebhotela elifudumeleyo.
Amaqanda amabini atyhulwa, adibanise kunye ne-curd mass, athulule umgubo ococekileyo kwaye udibanise kakuhle.
Isiqingatha se-anyanisi kunye ne-parsley yanyulwa kwaye yongezwa kwintlama.
Ukutshisa iphoyinti epholileyo, igrisi ngeoli yemifuno, bhaka i-pancake kwicala ngalinye ngomzuzu 1, faka iplate kwaye upholise kancane.
Ukuzaliswa, ubilise amaqanda ama-3 uze uphekwe, upholile kwaye uthathe iikhabhi. Hlanganisa ne-anyanisi esele, ityuwa kunye nochumisi omuncu.
Ephakathi kwepakeki, faka isipuni sokuzaliswa kwaye uqhube inhlama nge mvulophu.
Inyosi ibetha ngesardadi, ipilisi kunye netyuwa, yongeza inqabileyo yeoli yeoli kunye nefuthe kakuhle.
Thela ama-pancake agqityiweyo nge-sauce, ufafaze iinqumfusi ze-hazelnuts eziqhotyoshelwe kunye nokukhonza kwitafile.
Iipencake ezihlaza kunye neentshizi kunye neentlanzi ezibomvu, iresiphi nesithombe
Ama-pancake ashushu kunye namaqabunga amnandi-ahlala ehle kwaye enonkqisayo, kwaye xa ugcwalisa i-cream cream kanye nesitrofisi seentlanzi ebomvu eseluhlaza, akukho mntu unokuma phambi kwesitya.
ioli yemifino - 6 tbsp
Umgubo wengqolowa - 450 g
ubisi 3.2% - 600 ml
amaqanda - iingcezu ezine
isipinashi esitsha - 250 g
ishizi esinzima - 350 g
intlanzi ebomvu - 200 g
Amaqanda atshayiswa ushukela kunye netyuwa de ukubonakala kwe-foam emhlophe, uthule ubisi kwindawo yokushisa, usetyenziswe kakuhle.
Phakamisa umgubo, ungeze kwiincinci ezincinci kwisiseko se-liquid kwaye uxoke inhlama yeplastiki ngaphandle kweziqhumane kunye namaqhekeza.
Isipinashi ihlanjwe, yomiswe kwilinen itilu, ihlanjwe ngokukhawuleza kwaye ixutywe ne-blender.
Yongeza kwintlama yee-pancake , uxoke ngokucophelela uze udibanise kwaye ushiye imizuzu engama-20 ukuya etafuleni.
Ukutshiza i-pan kunye ne-grease lubricant. Bhaka i-pancake kumacala omabini kwimizuzu engama-1, gxiba isidlo kwaye upholise kancane.
Sika iiflanzi ezibomvu zentlanzi kwiincinci ezincinci, ezibanzi, uxoke ushizi kwi-grater enkulu.
Kwindawo ye-pancake iqela leentlanzi, uphefa ngeeshizi ezigayiweyo uze uqoke imvulophu okanye umqulu. Etafileni, sebenzisa ngeeskrini zakho ezizithandayo.
Iipancakes zenziwe kwi-buckwheat eluhlaza kunye nobisi lwekakhukhunathi
Kule recipe kubaluleke kakhulu ukuba kugcinwe ngokugqithiseleyo onke amanqanaba kwaye nayiphi na imeko ukuba ungathathi indawo ye-buckwheat eluhlaza kunye ne-buckwheat eqhelekileyo. Iipropati zemveli zineendawo ezihluke ngokupheleleyo kwaye azikhange zinike impembelelo elindelekileyo.
i-buckwheat green-150 g
ubisi lwekhenkco - 400 ml
Ufulawa lweFlakisi - 25 g
ityuwa - 1/2 tsp
i-stevia - 1/3 tsp
amanzi abilayo - 250 ml
I-buckwheat ebomvu igaya kwi-grinder ye-coffee kwilizwe le powder, udibanise nefeleksi kwaye uhlume nge-sieve yekhitshi.
Amaqanda amancinci. Phala ubisi lwekakhukhunathi kwiqondo lokushisa, uthule ityuwa, i-stevia, umgubo uze udibanise inhlama. Akufuneki kubekho inhlama enye kuyo.
I-Soda kufuneka icimwe ngamanzi abilayo, uthele intlama kwaye udibanise kwakhona kwakhona. Shiya etafileni imizuzu eyi-10-15, ukwenzela ukuba ubunzima be-buckwheat buvuvule kwaye buzaliswe ngokupheleleyo kunye nenxalenye yobisi.
Ukutshiza i-pan nokugcoba ngeoli. Ukusebenzisa i-ladle, uthele inxalenye yentlama ukuya ngasezantsi uze uvumele ukuba isasaze phezu komhlaba. Gubungela ngesiqhekeza uze ubhaka 1 ngomzuzu kwicala ngalinye.
Etafileni, sebenzisa umhluzi okanye iJulienne.
Iipinashi ijikeleza ngokuzalisa ushizi, imfundiso yevidiyo
Iipencake ezihlaza zodwa zibonakala zikhangelekile kwaye zikhangeleka. Kodwa ukuba uyabapheka ngokuzaliswa okuqinileyo kwaye ungakhonzekanga nje ngeembhokhwe okanye imvulophu, kwaye unqumle umgca ococekileyo, ococekileyo, isidlo siphenduka sibe yintlanzi ekhethiweyo kwaye iya kuhobisa kunye neetafile ezininzi kunye nezidlo ezidliwayo.
I-pancakes ephosiweyo, isidlo esiphunga isondlo sokutya kwansuku zonke kunye neetafile zeholide, zokupheka kunye nezithombe
Iipencake ezimnandi kwi-serum: zokupheka eziphambili ze-pancake ezinqabileyo
Ukutya okunomsoco kunye nesinambitha samadaka: iipilisi ezi-5 eziphambili
Izitya zaseRussia zokutya - ii-pancake ne-salmon, zokupheka kunye neefoto
I-Lemon Bilberry Pancakes
Iincinci ze-vanilla ezitshoyo kunye nokudibanisa ii-cookies
UKsenia Sobchak ulungiselela ukuzalwa komntwana
Isonka sesonka se mini kunye ne-cranberries kunye neentonga
Ingulube kunye neembotyi kunye nobhontshisi obuluhlaza
I-Rye Accordion Cookies
Umyeni wase-Overseas: iimpawu zamadoda avela kwamanye amazwe
URosa Syabitova waqala ukuxelela inyaniso ngomtshato ongaphumelekanga wentombi yakhe